Ujeeddo: On Line iibka ee Amazon
Mawduuca: On Line iibka ee Amazon Ningbo Yongsheng Brush Co., Ltd. -one mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha warshadaha burushka timaha xirfadeed ee Shiinaha. Amazon-mid ka mid ah dukaamada tafaariiqda ugu weyn adduunka ee adduunka. Laga soo bilaabo 2018, shirkadeennu waxay fulisay iibka e-commerce ee xudduudaha xudduudaha ah ee Amazon waxayna adeegsatay horteeda ...
Mawduuc: Qalab cusub-Bamboo Fiber burush / Burush Straw
Mawduuc: Qalab cusub-Bamboo Fiber burush / burush burush Caag la'aan, alwaax ma leh, biro ma leh. Ningbo Yongsheng Brush Co., Ltd. waxay si guul leh u codsatay qalab cusub - maadada isku dhafan ee Biomass. Waa nooc cusub oo walxo adkaysi leh oo ka kooban maadada macromolecular iyo matooriyada biomass ...
Ujeeddo: Kusocodka Sirdoonka Farsamada (AI)
Ujeeddo: Kusocodka Sirdoonka Artifishalka (AI) HAA, AI ayaa soo socota! Dhibaatada ka jirta qorista shaqaalaha, gaar ahaan saameynta cudurka faafa ee sanadka 2020.Ningbo Yongsheng Brush Co., Ltd. waxay sameysay dadaal weyn si loo horumariyo tikniyoolajiyadda AI wax soo saar ballaaran. Maalmahan, inta badan irbadaha ...